By vijayafm on	 January 9, 2018 अन्तरवार्ता, विजय परिवार, विविध खबर, श्रीधर उपाध्याय, स्थानीय
गैँडाकोट महोत्सव गैँडाकोटको शान
यही पौष २७ गते देखि माघ ८ गतेसम्म दोस्रो गैँडाकोट महोत्सवको आयोजना गरिदैछ । उद्योग वाणिज्य संघ गैँडाकोटको आयोजनमा यो महोत्सव आयोजना गर्न लागिएको हो । स्थानीय क्षेत्रको व्यवसायको प्रवर्धन, स्थानीय उत्पादनको बजारीकरण, स्थानीय कला संस्कृति र संरक्षण र उजागरका लागि दोस्रो गैँडाकोट महोत्सव आयोजना गरिएको आयोजकको दाबी रहेको छ । महोत्सवको तयारी, महोत्सवले स्थानीय समाजमा पार्ने प्रभाव, खर्च व्यवस्थापन, महोत्सवका आकर्षणहरुका बारेमा उद्योग वाणिज्य संघ गैँडाकोटका उपाध्यक्ष तथा दोस्रो गैँडाकोट महोत्सवका मूल आयोजक समितिका संयोजक दीपक सापकोटासंग सम्पादक श्रीधर उपाध्यायले कुराकानी गर्नुभएको छ । सापकोटासंग गरिएको कुरकानीको सम्पादीत अंश ।
गैँडाकोट महोत्सवको तयारी के भइरहेको छ ?
दोस्रो गैँडाकोट महोत्सव पौष २७ गते देखि माघ ८ गते सम्म गैँडाकोट २ को नारायणी किनारमा हुँदैछ । यसका लागि पूर्व तयारी करिब करिब सकिएको छ । भैपरि आउने कामहरु त बाँकीहरु नै हुने भए । यस वाहेक गैँडाकोट महोत्सवलाई कसरी सभ्य र भब्य रुपमा सम्पन्न पार्न सकिन्छ यस विषयमा हामीले छलफल गरिरहेका छौँ ।
गैँडाकोट महोत्सव आयोजना किन र के का लागि ?
गैँडाकोट नगर क्षेत्र लगायत नवलपुर क्षेत्रको आर्थिक गतिविधिलाई, उद्योगी उत्पादनलाई, भर्खर उत्पादन सुरु गरेका उद्योगहरुलाई क्रेता र विक्रेताको बीचमा समन्वय गराएर पहिचान बनाउने, तीनीहरुलाई सुधार्नु आवश्यक भए खरिदकर्ताले सुधारका लागि पनि आवश्यक सुझाब दिन सक्छ, यसले व्यवसायिक संस्कार बढाउन मद्धत पुग्दछ । यसैगरी स्थानीय कलाकारलाई प्रवर्धन गर्ने, स्थानीय कलाकारको कलाकृति पनि जनसमुदायसंग राख्ने, जनजाति तथा आदिवासीका रहन सहन र सांस्कृतिक विविधतालाई झल्काउने काम महोत्सवले गर्दछ, यति गरिनाले पनि सबै पक्षको पहिचानका साथमा संरक्षणमा पनि सहयोग पुग्न सजिलो हुने भएकाले दोस्रो गैँडाकोट महोत्सवको आयोजना गरिएको हो ।
यो महोत्सवबाट यो मध्य क्षेत्रले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा के प्राप्त गर्दछ ?
म तँपाईलाई एउटा उदाहरण दिन्छु । पहिलो गैँडाकोट महोत्सव गर्दै गर्दा यहाँका करिब ८ देखि १० जना व्यवसायि बन्नुभएको छ । महोत्सवलाई हेर्ने त्यसलाई अनुगमन गर्ने, मूल्यांकन गर्ने काम गर्नुभएका केही साथीहरु यो बीचमा व्यवसायि बन्नुभएको छ । अरु व्यवसायि थप व्यवसाय गर्न उन्मुख देखिनुभएको छ । अर्को कुरा बजारीकरण र बजारको गतिविधिलाई अन्वेषण गर्न महोत्सवले सजिलो बनाउँछ ।
महोत्सवमा स्थानीय उत्पादन भन्दा अन्तर्राष्ट्रिय उत्पादन बढी प्राथमिकतामा हो ?
प्राथमिकतामा राख्न खोजिएको भने होइन । तर हामीले अन्तराष्ट्रिय उत्पादनलाई आकर्षणको रुपमा राख्न सकिन्छ कि भनेर प्रयास गरेका हौँ । बाहिरी उत्पादन र बाहिरी व्यवसायको बारेमा केही जानकारी दिन सकियो भने त्यसले यस क्षेत्रका व्यवसायिहरुलाई केही मद्दत पुग्न सक्छकी भन्ने हाम्रो हेतु हो । यस पटक विदेशी उत्पादन राखियो भने अरु संस्करणमा अरु पनि आउने संभावना रहन्छ । नेपाली उत्पादन र विदेशी उत्पादन । नेपाली व्यवसाय र विदेशी व्यवसाय शैलीका बारेमा पनि अध्ययन गर्न मद्त पुग्दछ नी ।
तर यस्तै देखिन्छ तँपाईहरुको प्रचार सामाग्री अनि शैलीमा ?
हो हो विदेशी उत्पादनहरुलाई आकर्षणको रुपमा अघि सार्दै गर्दा त्यस्तो लागेको मात्रै हो । तर यो महोत्सवमा स्थानीय उत्पादनै पहिलो प्राथमिकतमा छ, स्थानीय बजारको प्रवर्धन गर्नु नै हाम्रो दायित्व, कर्तव्य र सोच पनि हो ।
स्थानीयताको के कुरामा यो महोत्सवले प्रवर्धन गर्ला ?
हामीहरुले डेरी उत्पादनलाई पनि प्राथमिकतामा राखेका छौँ , विउ विजनको बारेमा पनि हामीले जानकारी सहित त्यसको अवलोकनका लागि व्यवस्था मिलाइरहेका छौँ । यसैगरी यस क्षेत्रका कृषि अन्तर्गतका उपजहरुलाई बढी मात्रामा फोकस गर्दैछौँ । स्थानीय उत्पादन डेढलाख दुई लाख पब्लीकले अवलोकन गर्यो भने पनि त्यसले उत्पादीत समाग्रीको ब्राण्डिङ गर्न सजिलो हुन्छ, बजारीकरणका लागि पनि सजिलो हुने भएकाले स्थानीय उत्पादनको प्रवर्धनका लागि यो महोत्सवजस्तो आवश्यक पक्ष अरु केही हुनै सक्दैन । व्यवसायिका लागि मात्र होइन सर्वसाधरणका लागि यो महोत्सव झन् महत्त्व राख्दछ किन भने स्थानीय स्तरकै उत्पादन हेर्न पाइयो, उपभोग गर्न पाइयो भने सस्तो पनि हुने आफ्नो पहुँच पनि सधैँ रहने भएका कारणले पनि स्थानीय उत्पादनको प्रवर्धन र बजारीकरणको मार्ग बन्न सक्छ । महोत्सव गैँडाकोटको सान हो । पहिले कृषि डिपार्टमा बसेर हामीलाई सहयोग गर्नुभएको साथीले अहिले चितवनमा अष्ट्रिच पालनको राम्रो व्यवसायि बन्नुभएको छ । यस अघिको महोत्सवमा अष्ट्रिच देखाउने समितिमा रहेर उहाँले काम गर्नुभएको थियो । यस्तै गाडीको प्रदर्शनको समितिमा रहेर काम गर्नुभएका दाताराम घिमिरेले मित्सुविसीको अहिले डिलर नै चलाइरहनुभएको छ । यस्ता धेरै उदाहरणहरु छन् ।
यो महोत्सवका प्रमुख आकर्षण के हुन् ? के हेर्न आउने यो महोत्सव ?
पहिलो आकर्षण त नवलपुरका उत्पादन हुन् , पहिलो यो क्षेत्र गाउँको रुपमा थियो, पछि नगरपालिका भएपछि ब्यापार व्यवासायिको लागि राम्रो क्षेत्रका रुपमा विकास हुँदै गएको छ । यहीँका उत्पादनहरुनै हाम्रा पहिलो आकर्षण हुन् । मनोरञ्जनका लागि लागिएका बस्तुहरु हुन्छन् । मौलाकालिकाको मन्दिरको आभाष दिने मूल प्रवेशद्धार हुनेछ । ओमशान्तीको ज्ञान दिने आकर्षक स्टल रहनेछ । मरुभूमिको स्वरुप देखिने सेल्फी जोनको स्थान रहनेछ । बाल खेलौना उद्यानहरु पनि रहनेछ ।
ख्यातीप्राप्त कुन कुन कलाकार आउँदै छन् ?
हामीले स्थानीय कलाकारहरुलाई प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले पनि यो महोत्सव आयोजना गरिएको हुनाले स्थानीय कलाकारहरुलाई बढी प्राथमिकतामा राख्नेछाँै । हुन त कोही पनि कलाकार स्थानीयहुँदैन । सबै कलाकार राष्ट्रिय हुन् तर पनि भौगोलिक रुपमा भन्नुपर्दा यही क्षेत्रका कलाकारहरु नै पहिलो प्राथमिकतामा हुन्छ । बाहिरबाट पनि देशभर नाम चलेका कलाकारहरु आउनुहुनेछ । मनोरञ्जना दिनुहुनेछ ।
प्रतियोगितात्मक के के कुराहरु हुँदै छन् ?
प्रतियोगितात्मक त्यस्ता ठूलाठूला कार्यक्रम त रहँदैन । तर पनि गायन प्रतियोगिता, कवि गोष्ठीहरु हुँदै छ । यसका लागि छलफल पनि चलिरहेको छ । छिट्टै समग्र कार्यतालिका पनि बनाउँदैछौँ ।
महोत्सवका लागि कति सम्मको खर्च हुँदै छ ?
अहिले एकीन भइसेको छैन । हामीसंग प्रायोजक, सहप्रायोजक र स्टलहरुबाट आउने स्रोत बाँकी छ । यसको बारेमा छलफल पनि भइरहेके छ । अहिले नै एकीन भन्न सकिदैन तर पनि प्रारम्भीक अनुमानकै कुरा गर्नुभएको हो भने ७० देखि ८० लाख सम्म खर्च हुन्छकी भन्ने अनुमान गरेका छाँै । केही रकमहरु विकासमा खर्चिएका छाँे । महोत्सव स्थल वरिपरि बाटो बनाउन र सोलार राख्न, शौचालय निर्माणका लगि र भुभाग समथर बनाउनका लागि केही काम भएको छ । एकीन त अहिले नै भन्न सकिदैन ।
डेढ करोडको कारोबार गर्ने अनुमान हो तँपाईहरुको ?
यसलाई त भन्न सकिदैन । त्यो भइसकेपछि मात्र भनौँला । दोस्रो गैँडाकोट महोत्सव सकिएपछि मात्रै यहाँहरुलाई बोलाएर के कति कारोबार भयो भने लेखा प्रतिवेदन नै यहाँहरु समक्ष राखाँैला । यो सामाजिक संस्था भएका कारण पछि बरु घाटा भए घाटा भयो भनेर भनाँैला, नाफा भयो भने नाफा भयो भनेर भनौँला ।
बचत पैसा के का लागि ?
बचत भयो भने, उद्योग वाणिज्य संघको भवन निर्माणका लागि खर्च हुनेछ । पहिलेको महोत्सवबाट आएको रकम विकास निर्माणमा खर्च गरियो भने अहिले भवन निर्माणका लागि खर्च गर्ने की भन्ने सोच बनाएका छाँै ।
अघिल्लो पटक सार्वजनिक गर्न ढिला गर्नुभयो भन्ने गुनासो थियो, अहिले एक महिनाभित्रै सार्वजनिक गर्न सक्नुहुन्छ ?
हामीले यस पटक ढिला गर्दैनौँ । दोस्रो गैँडाकोट महोत्सव सकिएको करिब एक महिना भित्रै समग्र आर्थिक पारदर्शीता बाहिर ल्याउने छौँ । हामीले गरेको काम अहिलेबाट नै पारदर्शी रहेको छ । महोत्सव सकिएपछि सम्पूर्ण आर्थिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नेछाँै, यसका लागि एक महिना समय लाग्ला ।
समय दिनुभयो यसका लागि धेरै धेरै धन्यवाद,
महोत्सवका लागि केही भन्ने अवसर दिनुभयो यसका लागि धेरै धेरै धन्यवाद विजय मिडिया परिवारलाई, यसैबीच पौष २७ गतेदेखि माघ ८ गतेसम्म उद्योग वाणिज्य संघ गैँडाकोटको आयोजनमा हुन गइरहेको दोस्रो ऐतिहासिक गैँडाकोट महोत्सवमा सम्पूर्ण पाठक वर्गलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु । समुद्घाटनका दिन सम्पूर्ण विषयगत संघसंस्था र सम्पूर्ण नगरबासीहरुलाई शोभा यात्राका लागि पनि आफ्नो भेषभूषा, संस्थाको चिनारीसहित उपस्थित भइदिनुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछाँै ।